प्रेम सम्बन्धका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा आपत्ति जनाइन् करिश्मा मानन्धरले, भनिन् – मलाई महिला भनेर हेपेको ? | BBM WORLD TV
प्रेम सम्बन्धका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा आपत्ति जनाइन् करिश्मा मानन्धरले, भनिन् – मलाई महिला भनेर हेपेको ?
काठमाडौं – नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना केही दुखेसो पोखेकी छिन् । उनले अन्तवार्तामा आफुलाई सोधिने गरेका प्रश्नहरुको प्रतिप्रश्न गरेकी छिन् ।
अन्तवार्ताको क्रममा प्रेम सम्बन्धका बारेमा सोधिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले ‘तपाई फलानो संग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो रे ‘ भनेर सोध्ने गरेको पनि बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन् – ‘म एउटा बिबाहित महिला हु परिवारमा बस्छु बिहे गर्ने उमेर को छोरी छ , अब यस्तो प्रश्न को के जवाफ दिउ ?’
त्यस्तै मलाई महिला भनेर हेपेको भन्दै उनले भनेकी छिन् – ‘तेहि प्रश्न ती पुरुषहरु जो संग मेरो प्रेम सम्बन्ध भनिएको हुन्छ ती मानिसहरु लाई चाहिँ त्यो प्रश्न सोधिएको पाउदिन ? किन रहेछ ? उनिहरु पुरुष भनेर आट नगरेको होकी मलाई महिला भनेर हेपेको ?’
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेको स्टाटस यस्तो छ – ‘एउटा महिला कलाकार भएको नाताले मैले घरीघरी भोग्नु परेको एउटा बिषय के हो भने तपाई फलानो संग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो रे !! म जुन क्षेत्रमा काम गर्छु त्याहाँ विभिन्न मानिसहरु संग संगत हुन्छ कतिसंग नजिक पनि भइन्छ , यो उमेर सम्म आउपुग्दा पनि अन्तरवार्ता हरुमा त्यो एउटा प्रश्न जरुर आउँछ ! म एउटा बिबाहित महिला हु परिवारमा बस्छु बिहे गर्ने उमेर को छोरी छ , अब येस्तो प्रश्न को के जवाफ दिउ ?
अनि तेहि प्रश्न ती पुरुषहरु जो संग मेरो प्रेम सम्बन्ध भनिएको हुन्छ ती मानिसहरु लाई चाहिँ त्यो प्रश्न सोधिएको पाउदिन ! किन रहेछ ? उनिहरु पुरुष भनेर आट नगरेको होकी मलाई महिला भनेर हेपेको ?
कमसेकम बिनोद जि र परिवारको त इज्जत गर्नुपर्ने जस्तो नि !! के दर्शकहरुलाइ येस्तो प्रश्न को जवाफ सुनेर रमाइलो हुन्छ होला र ? के बुझौ भने अहिलेको दर्शक श्रोता धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ सबै कुरा बुझ्नु हुन्छ ।